कोरोनाको संक्रमणले थालिएका अमिताभ बच्चनलाइ फेरी के भयो ? – Dainik Sangalo
कोरोनाको संक्रमणले थालिएका अमिताभ बच्चनलाइ फेरी के भयो ?
August 2, 2020 654
रातको अन्धकार र चिसो काठोमा, म गाइरहेको छु । आँखा निदाउने प्रयासमा छन् । वरिपरि कोही छैनन् र मलाई थाहा छ, आफूमा इच्छा शक्ति छ भने यसलाई निरन्तरता दिने स्वतन्त्रता पनि मभित्रै छ । बिरामी कति छिटो निको हुन्छ भन्ने कुरा, उपचारपछि गरिने हेरविचारले महत्त्व राख्छ । दिन बित्दै गएसँगै हामीमा (बिरामी) नयाँ–नयाँ अनुसन्धानहरू हुन थाल्छन् । यो रोगले संक्रमितमा देखिने मानसिक स्थिति र अन्य असरहरू कति अदृश्य हुन्छन् ठीक मानसिक तनावमा जस्तै बाहिरबाट नदेखिने ।
कोभिड बिरामीलाई साता दिनसम्म अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिन्छ, दोस्रो व्यक्तिलाई हेर्न र भेट्नसम्म पनि दिइँदैन भन्ने सत्यले बिरामीमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ । अस्पतालमा नर्स र डाक्टरहरू समय–समयमा तपाईंको उपचार र अवस्थाबारे बुझ्न आउँछन् । तर उनीहरूले पीपीई लगाएका हुन्छन् । सधैं शरीर पूरै ढाकेर आउने भएकाले उनीहरू को हुन्, विशेषता के छ, उनीहरूले कस्तो भाव प्रकट गर्दै छन् बिरामीले भेउ पाउँदैन । सबै सेता पहिरनमा रोबोटजस्तै उपस्थितिमा । चाहिने स्वास्थ्य उपचारका सामग्री राखेर उनीहरू फर्किहाल्छन् । किनभने त्यहाँ जति धेरै बस्यो संक्रमण हुने सम्भावन त्यति नै हुन्छ ।
डाक्टरहरू, जसको मार्गदर्शनमा तपाईंको हेरचाह र स्वास्थ्य अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार हुन्छ, उनीहरू (डाक्टर) स्वयं नै तपाईंलाई आश्वासन दिन तपाईंछेउ कहिल्यै आउँदैनन् । उनीहरू मात्रै सञ्चारका वाहकजस्तो उपचारका सामग्री मात्रै पुर्‍याउन आउँछन् ।
यस्तोे परिस्थितिमा डाक्टरहरूको यो व्यवहार केही हदसम्म उचित हो । तर अझै केही अव्यवहारिक लाग्छ, पीपीईमै भए पनि नआउने भए त हामी रिमोट पद्धतिमा उपचारमा छौंजस्तो लाग्थ्यो । के यसले बिरामीमा मानसिक असर गर्छ त, मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन्– पक्कै गर्छ । डिस्चार्जपछि संक्रमितहरूमा क्रोधको मात्रा बढ्छ ।
समाजले अलग व्यवहार गर्छन् कि भन्ने सोचले उनीहरू समाजमा जान डराउँछन् । समाजले उनीहरूलाई रोगवाहकका रूपमा व्यवहार गर्छन् । उनीहरूमा यो समाजमा मेरो स्थान छैन भन्ने सोच र चिन्ता पलाउँछ । जसले गर्दा उनीहरूमा डिप्रेसन र एक्लोपन बढ्न थाल्छ, आइसोलेसनमा बस्दाको एक्लोपन पुनः ब्युँतिन्छ । रोगले शरीर त्यागे पनि ज्वरो र कमजोरीले अझै ३,४ साता शरीरलाई जकडेकै हुन्छ ।
विश्वले यो रोगबारे कुनै प्रमाण पद्धति फेला पारेको छैन । हरेक केस फरक छन् । हरेकदिन नयाँ लक्षणबारे अनुसन्धान र अवलोकन भइरहेको छ । यसरी पूरै विश्वकै स्वास्थ्य क्षेत्र आजजस्तो अशक्त कहिल्यै भएको थिएन । परीक्षण र त्रुटि अहिलेजस्तो ठूलो मागमा कहिले आएको थिएन ।
(बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनले नानावटी अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर लेखेको आइसोेलेसनको अनुभव र कोरोनाको मानसिक असर उल्लेख गरिएको ब्लगको अनुवाद)
Prevभुषको आगो सल्के झै कोरोना संक्रमित बढेपछि बाँकेमा आजदेखि तीन दिन निषेधाज्ञा जारी
Nextबाकसमा फालेको नानी पाल्ने आमा ‘मलाई जेल हाल्छन्’ भन्दै आईन्। फेसबुकमा लभ गरेर सम्बन्ध राख्दा यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस)
धरान-१५ मा स्कुटर र मिनी ट्याक्टर ठोक्किए, धरान-१४ का गोकुल तामाङको मृत्यु
हार्दिक बधाई: सशस्त्र प्रहरिको इन्स्पेक्टर पदमा नाम निकाल्न सफल पहिलो मधेशि महिला प्रतिभा पाल
चीनले १००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई हटायो
कस्तो निर्दयी आमा ! यति सानो छोरिलाई छोडेर आमा भागिन् ,छोरी आमा खोज्दै रुन्छिन् (भिडियो हेर्नुस् )